मस्तिष्कका लागी अत्यन्तै खराब छन् यी ५ प्रकारका खानाहरु, कतै तपाईले त खानुभएको छैन ? | सुदुरपश्चिम खबर
मस्तिष्कका लागी अत्यन्तै खराब छन् यी ५ प्रकारका खानाहरु, कतै तपाईले त खानुभएको छैन ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १८, २०७८ 18
हामी सबै राम्रोसँग जान्छौँ कि मस्तिष्क हाम्रो शरीरको एक महत्वपूर्ण अंग हो । हाम्रो शरीरको सबै क्रियाकलापलाई मस्तिष्क नियन्त्रण गर्दछ। तर के तपाई तपाईको मस्तिष्कको स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुहुन्छ त ? तर होइन किनकी तपाई त्यस्ता खाद्यपदार्थको भरपुर मात्रामा सेवन गर्नुहुन्छ जसलाई खानाले मस्तिष्क अत्यन्तै खराब हुने गर्दछ।
शरीर र तपाईको मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्नका लागी उचित आहारको आवश्यकता पर्दछ । तर यस्ता केही विशेष प्रकारको आहारले तपाईको स्वास्थ्य तथा मस्तिष्कमा असर पार्दछ । त्यसैले तपाईलाई हाम्रो मस्तिष्कलाई बिग्राने कुन कुन खाद्यपदार्थ हुन् त भनेर जानकारी लिनु अत्यन्तै आवश्यक छ।
तपाईको दिमागलाई स्वस्थ र सक्रिय राख्नको लागी उचित पोषक तत्व र खनिजपदार्थको आवश्यकता पर्दछ । यस लेखमा तपाई त्यस्ता खाद्यपदार्थहरुको बारेमा जान्नुहुनेछ जसबाट तपाई बच्नुपर्ने हुन्छ।
मस्तिष्कको लागी हानीकारक छ ट्रान्स फ्याट
दिमागी स्वास्थ्यको लागी सबै वसा खराब हुँदैनन् । ट्रान्स वसा नामक एक विशेष प्रकारको वसाले मस्तिष्कमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। ट्रान्स वसा स्वाभाविक रूपमा मासु र डेयरी सहित पशु उत्पादनहरु मा पाइन्छ, तर यस प्रकार ट्रान्स वसा भन्दा हानिकारक अरु केहि छैन। तर उद्योगहरु मा तैयार गरीने ट्रान्स वसा विशेष गरी धेरै प्रकार को खाद्यपदार्थहरुको को तयारी मा प्रयोग गरीन्छ।
यो मस्तिष्क को लागी नराम्रो छ। यसलाई हाइड्रोजनीकृत तेल को रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । यस प्रकारको ट्रान्स फ्याट मुख्य रूप बाट बजारमा किनेको डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, चिप्स र अन्य प्रशोधित खाद्य पदार्थहरुमा पाईन्छ। धेरै ट्रान्स बोसो को उपभोग मस्तिष्क को लागी खराब छ किनकि यो अल्जाइमर र डिमेन्शिया को कारण बन्नसक्छ ।
मस्तिष्कको लागी खराब छ मिठा पेय
अधिकांश व्यक्तिहरु आफ्नो प्यास बुझाउनको लागी मिठो पेयपदार्थ जस्तै सोडा पानी,स्पोर्टस ड्रिक,एनर्जी ड्रिक र फलको जुसको सेवन गर्ने गर्दछन् । तर सायद तपाइँलाई थाहा छ कि यी सबै पदार्थहरु तपाइँको मस्तिष्क को लागी धेरै खराब छन्।
यसको कारण यो हो कि यी पेय पदार्थहरुमा पोषक तत्वहरुको कमी हुन्छ र साथमा चिनीको मात्रा उच्च हुन्छ । तसर्थ, यी पदार्थहरुको अत्यधिक सेवनले शारीरिक र मानसिक अशक्तता पैदा गर्न सक्छ। यस बाहेक, यी पेय पदार्थहरु पनि मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अल्जाइमर वा डिमेन्शिया को कारण बन्न सक्छ।
यी पेय पदार्थ मा रहेको फुक्ट्रोज को उच्च सेवनले सिक्न को क्षमता, स्मृति, समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्य र मस्तिष्क मा नयाँ न्यूरा‘न्स को गठन कम गर्न मा उपयोगी हुन्छ। यसले मस्तिष्कमा घाउँ बढाउन को लागी कार्य गर्न सक्छ। त्यसैले, तपाइँको दिमाग लाई फिट राख्न र मस्तिष्क को स्वास्थ्य को बनाए राखन को लागी, तपाइँ यी पेय पदार्थहरु को उपभोग बाट बच्नु पर्छ।
मस्तिष्कको लागी खतरनाक छ काब्र्स
मस्तिष्क को लागी खाना यस्तो हुनुपर्छ कि बोसो वा फ्याट कुनै पनि नहोस् । परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट ती हुन् जो प्रशोधित अन्न बाट बनेका छन्। यो जरूरी छैन कि ती मीठा हुन् तर यिनीहरु खाएपछि छिट्टै चिनीमा परिणत हुन्छन्।
किनकी रिफाइनिंग प्रक्रिया फाइबर मुल अन्नबाट बाहिर निक्लन्छ । एक आहार परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट मा अमीर एक उच्च ग्लाइसेमिक आहार हो कि तपाइँको रक्त शर्करा को स्तर बढाउन सक्छ।
अध्ययनले यो पनि देखाउँछ कि बच्चाहरु जो परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट को उच्च मात्रा मा उपभोग गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरुको दिमाग अल्लि कम हुनेछ । यसबाहेक, वृद्ध मानिसहरु जो परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट बाट आफ्नो दैनिक क्यालोरी को ५८ प्रतिशत भन्दा बढी उपभोग गर्छन् ।
त्यस्ता व्यक्तिहरु अन्य मानिसहरु भन्दा मानसिक हानि र डिमेन्शिया को उच्च जोखिम मा हुन्छन्। यसैले, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट आहार मस्तिष्क को लागी खराब मानिन्छ। तपाइँहरु पनि यस्ता पदार्थहरु धेरै मा उपभोग गर्न बाट बच्न पर्छ।
दिमागको लागी खराब हुन्छ प्रोसेस्ड र प्याक्ड फुड
हामी मध्य अधिकांश व्यक्तिहरु समयको कमीका कारण प्रोसेस्‍ड र प्याक फूडको अधिक सेवन गर्दछन् । तर त्यस्ता खाद्य पदार्थहरु मा, पोषक तत्व र खनिज को मात्रा कम हुने गर्दछ । साथै धेरै चीनी र नुन को उपयोग गरीन्छ। धेरै मानिसहरु यसलाई पश्चिमी सभ्यताको आहार भन्छन् जसलाई फास्ट फूड भनिन्छ।
व्यस्त जीवनशैली को कारण, धेरै मानिसहरु सस, ड्रेसिंग पास्ता र पूर्व(पकाएको खाना आफ्नो आहार को भाग को रूप मा उपभोग गर्छन्। यी सबै खानेकुराले तपाइँको मस्तिष्कलाई हानि पु¥याउन सक्छ। तसर्थ, दिमागमा शान्ति ल्याउन र सकारात्मक सोच बढाउन, नियमित र घरेलु सन्तुलित आहार गर्नुपर्छ।
किनकि घरमा पकाएको खानामा पोषक तत्व र खनिजहरुको उचित मात्रा हुन्छ। जुन तपाइँको मस्तिष्क सहित शारीरिक स्वास्थ्य को लागी आवश्यक हुन्छ।
ब्रेनको लागी खराब छ अत्याधिक प्रयोग गरिएको माछा
हामी सबैलाई थाहा छ कि माछा खाना स्वास्थ्य को लागी लाभदायक छ। यो किनभने माछा मा ओमेगा ३ फैटी एसिड, भिटामिन बी १२, फलाम सहित अन्य पोषक तत्वहरु को राम्रो मात्रा हुन्छ। तर माछा को केहि प्रकार को माछामा पारा (mभचअगचथ) उच्च मात्रा मा हुन्छन्।
पारा मस्तिष्क स्वास्थ्य को लागी हानिकारक छ। तसर्थ, जुन माछामा पारा को उच्च मात्रा हुन्छ त्यो मस्तिष्क को लागी खराब खाना मानिन्छ। यस्तो स्थिति बाट बच्न को लागी, ट्यूना, तलवार माछा, सुन्तला रफी, म्याकेरल, शार्क र टाइलफिश थोरै मात्रा मा उपभोग गर्नुपर्छ। किनभने यस्ता माछामा अन्य पोषक तत्वहरु साथै पारा पनि यी माछा मा उपस्थित हुन्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार